Wasaaradda Cadaaladda oo Muqdisho ka furtay siminaar ku saabsan habraaca sharci qorista. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda Cadaaladda oo Muqdisho ka furtay siminaar ku saabsan habraaca sharci qorista.
Wasaaradda Cadaaladda oo Muqdisho ka furtay siminaar ku saabsan habraaca sharci qorista.
Tababbarkan oo socon doono muddo labo cisho ah, isla markaana lagu baran doono habraaca sharci qorista oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Caddaaladda ayaa waxaa ka qeyb galay Howlwadeenada Wasaaradda iyo marti sharaf kale.
Previous articleMareykanka oo Haftar ugu baaqay in uu joojiyo dagaalada uu ka wado duleedka Tripoli.
Next articleDuqa Muqdisho “guul ayuu kusoo dhammaaday safarkeenii South Africa.+sawirro.